कुनै देशको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामलाई भूराजनीति भनिन्छ । भूराजनीतिका अवसर र चुनौति दुवै हुन्छन् । भूराजनीतिले राज्य र कूटनीति सञ्चालनमा ठूलो अर्थ राख्दछ । भूराजनीति क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्बन्धको आधार हो ।
समकालीन विश्वमा राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका सफल उदाहरण हेर्दा त्यसको एक महत्वपूर्ण तत्व सर्वथा भूराजनीति हुन्छ । भूराजनीति – आधुनिक राजनीतिशास्त्रको सबैभन्दा पेचिलो र मौलिक प्रश्न हो । पेचिलो यस अर्थमा कि भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कैयौं राज्य पतन भएका छन् । कैयौं देशमा अनपेक्षित वा अवाञ्छित सत्ता-विप्लव र गृहयुद्ध भट्किएका छन् । कैयौं देशले स्वाधिनता गुमाएर गुलाम हुनु परेको वा वाध्यतावश थिचोमिचो सहेर अस्तित्व मात्र जोगाएर बस्नु परेको छ ।
अर्को पाटो हेर्दा – भूराजनीतिक सन्तुलन गर्न सकियो भने स्वाधिनताको रक्षा हुन्छ । वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा खासै अप्ठ्यारो आउँदैन । वैदेशिक श्रम, पुँजी, वस्तु तथा सेवाको आप्रवाह अनुकुल बनाउन सकिन्छ । निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । देशको आर्थिक विकास छिट्टै हुने अवसर सृजना हुन्छ ।
मौलिक यस अर्थमा कि – भूराजनीति हरेक देशको आ-आफ्नो फरक स्थिति हो । भूराजनीति कुनै एक देशको अर्को देशसँग मिल्दैन । यसको सही मोडेल वा सिद्धान्त कुनै किताब पढेर पाउन सकिन्नँ । अर्को देशको उदाहरणबाट जस्ताको त्यस्तै टिप्न वा सिक्न सकिन्नँ । हरेक देशले आफ्नो भूराजनीतिक जटिलता र अवसर आफै बुझ्नु पर्दछ । सम्भावना र चुनौति आफै विश्लेषण, सामना र उपयोग गर्नु पर्दछ ।
आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान यु भूराजनीतिलाई उच्च महत्व दिन्थे । आफ्नो विश्वप्रसिद्ध पुस्तक – ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फष्टः द सिंगापुर स्टोरीः १९६५–२०००’ मा उनले तत्कालीन सिंगापुरको भूराजनीतिलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्ः
एक– मलेसिया । मलेसियाले सिंगापुरलाई मले संघबाट जबर्जस्त बाहिर निकालेको थियो । मलेहरु सिंगापुरको भविष्यबारे आश्वस्त थिएनन् । त्यो समुन्द्र किनारको सानो माझी बस्ती, विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा त्यसको कुनै अर्थ र महत्व होला भन्ने मलेहरु ठान्दैनथे । मलेसियालाई सिंगापुरी जनताको कुनै मतलब थिएन ।
दोस्रो– चीन । बहुसंख्यक सिंगापुरी दक्षिणी चिनियाँ मूलका थिए । चीन सिंगापुर मामिलामा रुचि राख्थ्यो । चीनमा कम्युनिष्ट शासन झनै मजबुत हुँदै थियो । हिन्द-चीन क्षेत्रमा कम्युनिष्ट छापामारहरुको सशस्त्र गतिविधि तीव्र थियो । ती समूहलाई चीनको सहयोग थियो । भियतनाम युद्ध संघारमै अनुभूत भइरहेको थियो ।
तेस्रो– बेलायत । बेलायती सेना सिंगापुरमा छँदै थियो । बेलायती साम्राज्यवादबाट भर्खरै मुक्त सिंगापुरी जनता बेलायतको भूमिका नबढोस् भन्ने चाहन्थे । तर बेलायतलाई धेरै चिढ्याए हङकङझैं औपनिवेशिक शासन लाद्ने डर थियो । बेलायतलाई धेरै चिढ्याउनु पनि भएको थिएन, धेरै महत्व दिनु पनि भएको थिएन । चातुर्यतापूर्वक बेलायती सेना बर्हिगमित गराएर सिंगापुरको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्नु थियो ।
चौथो– इन्डेनेशिया । जो सिंगापुरका लागि सदाबहार दुश्मनजस्तो थियो । सधैं ससाना कुरामा निहुँ खोजिरहन्थ्यो । सानो देश भनेर बारम्बार हेप्थ्यो ।
पाँचौं– भारत । सिंगापुरी जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण अंश तमिलहरुको थियो । तर भारत भर्खरै स्वतन्त्र भएको गरीब र कमजोर देश थियो । स्वयं भारतीय राजनीतिमा तमिलहरु मूलधारमा थिएनन् । भारत सिंगापुरलाई कुनै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।
छैठौं– अमेरिका । अमेरिका सिंगापुरभन्दा धेरै टाढा थियो । तर हिन्द-चीन क्षेत्रमा भइरहेको कम्युनिष्ट विद्रोह र ताइवानको कारण अमेरिका त्यो क्षेत्रको राजनीतिमा रुचि राख्थ्यो । सम्भावित भियतनाम युद्धको कारण हिन्द-चीन क्षेत्र अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण थियो ।
यस्तो स्थितिमा सिंगापुरको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शान्ति र आर्थिक विकासका लागि ठीक रणनीति के हुन सक्छ ? लि क्वान युले सिंगापुरको भूराजनीतिक स्थितिको विश्लेषण यसरी गरेः
कम्युनिष्ट चीनसँग नजिकिनेबित्तिकै बेलायत सिंगापुर छोड्न तयार हुने छैन । बेलायतले हङकङझैं सिंगापुरलाई पनि उपनिवेश गर्छ । चीनसँग नजिक हुँदा हिन्द-चीन क्षेत्रका सशस्त्र कम्युनिष्ट समूहलाई भित्रभित्रै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सिंगापुर युद्धमा फस्न सक्छ । मलेसियाबाट चाहेर पनि कुनै सहयोग पाउने अवस्था छैन । भारत सकारात्मक छ तर सहयोग गर्ने क्षमता छैन । के गर्ने त ?
लि क्वान युले चीनको नजिक नहुने विश्वास बेलायतलाई दिलाएर सेनालाई फिर्ता पठाए तर सिंगापुरको सुरक्षाका लागि गोर्खा रेजिमेन्ट प्रयोग गरे । इन्डोनेशियालाई फकाएर शत्रुबाट मित्रु बनाए । चीनप्रति तटस्थ नीति अख्तियार गरे । सिंगापुर सेना निर्माणमा इजरायलको सहयोग लिए । भारतसँग सद्भावपूर्ण सम्बन्ध राखेर भारतको सद्भावले सोभियत संघलाई सन्तुलन गरे । किनकी त्यतिखेर भारत सोभियत धुरीको देश थियो ।
अमेरिका सिंगापुर नेटोमा सामेल होस् भन्ने चाहन्थ्यो तर उनी सामेल भएनन् किनकी नेटोमा सामेल हुँदा भियतनाम युद्धमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो । यी सब परिस्थितिबाट लि क्वान यु चातुर्यतापूर्वक बाहिर निस्किए । उनले सैन्य मामिलामा तटस्थता र आर्थिक विकासका लागि धेरै टाढाको देश अमेरिका र नोर्डिक मुलुकबाट लगानी भित्र्याउने नीति लिए । लि क्वान युको यही नीतिको कारण आजको सफल सिंगापुर बन्यो ।
विज्ञहरुका अनुसार भूराजनीतिका ३ वटा मुख्य तत्व हुन्छन् । भौगोलिक बनौट, भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्या संरचना । भौगोलिक बनौटका दृष्टिकोणले राज्यहरुलाई हिमाली, पहाडी, मैदानी, समुन्द्र किरानाका, टापु, रेगिस्तानी र आइसलैण्ड गरी ७ भागमा बाँड्ने गरिन्छ । यी फरक भौगोलिक बनौटले राज्यहरुका लागि फरकफरक रणनीतिक तथा आर्थिक सम्भावना र चुनौति सृजना गर्दछ ।
भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिकोणबाट कुनै देश कस्ता भौगोलक विशेषता, विचार, राज्यप्रणाली भएका देशहरुबीच छ भन्ने हेरिन्छ । जनसंख्या संरचना भनेको राज्यको जनसंख्या बनौट तथा त्यसको भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक समानता वा भिन्नताको विश्लेषण हो । यी पक्षले पनि वैदेशिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक आयामलाई प्रभावित गर्न सक्दछन् ।
नेपालको भूराजनीतिलाई हेर्ने आधार पनि यिनै हुन् । भौगोलिक बनौटका दृष्टिकोणबाट नेपाल हिमाली, पहाडी र मैदानी भूबनौटको सम्मिश्रण हो । बाँकी सामुन्द्री, टापु, रेगिस्तानी वा आइसलैण्ड छैन । अवस्थितिका दृष्टिकोणले नेपाल भारत र चीन जस्ता विशाल क्षेत्रफल, अर्थतन्त्र र जनसंख्या भएका देशको बीचमा छ । जनसंख्या संरचनाका दृष्टिकोणले नेपालमा भारोपेली भाषा परिवारको बाहुल्यता भएको, हिन्दू सनातनी, किराँत र बौद्ध धर्मको आधिक्य छ । हिन्दूभित्रै खस-आर्यजस्ता पहाडी र तराईमा थारु–मधेसी उल्लेख्य रुपमा छन् ।
तर, बोटबर्मेली भाषा परिवारको मातृभाषा भएका हिमाली तथा पहाडी मंगोल मूलका जनजातिहरुको पनि ठूलो संख्या छ । धार्मिक हिसाबले अर्को महत्वपूर्ण समुदाय मुस्लिम हो भने द्रवेडेली र आग्नेयाली जाति र मातृभाषा भएका जनता पनि छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धको प्राथमिकतालाई हेर्दा निम्न अनुसार वर्गीककरण गर्नुपर्ने हुन्छः
एक–सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरु, भारत र चीन । दुई– सीमा नजोडिएका नजिकका मित्रहरु सार्क राष्ट्रहरु र म्यानमार । तीन– विश्व शक्ति–अमेरिका । चार– युरोपेली मित्र राष्ट्रहरु । पाँच– श्रमसम्झौता भएका, नेपाली कामदार धेरै जाने देशहरु जस्तै– मलेसिया, युएई, साउदी, कतार, कुवेत, दक्षिण कोरिया आदि । छ– बाँकी विश्व, विशेषतः अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरु ।
यी फरकफरक समूहभित्रका देशको नेपालसँगको सम्बन्धका आधार र स्वार्थहरु फरक-फरक छन् ।
पहिलो प्रश्न– भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी लिने, यसका सम्भावना र चुनौति के हुन् भन्ने हो । नेपालको भूगोल प्राकृतिक हिसाबले भारततिर ढल्किएको छ । हिमालयदेखि हिन्द महासागरतिरको ओरालो भूबनौटमा नेपाल छ । नेपालका सबै नदीनाला भारततिर बग्दछन् । नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा छ । दुई देशका जनता एकअर्कामा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने सम्झौता छ । भाषा मिल्छन् । नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु आदि भाषाहरु दुबै देशमा बोलिन्छन् । यी सबै एकै भाषा परिवारका भाषा हुन् । यी सबै भाषिक समुदायका मानिसले हिन्दी बुझ्छन् । नेपाली र भारतीय जनताका धार्मिक तीर्थस्थल साझा छन् ।
चीन– उत्तिकै महत्वपूर्ण र नजिकको छिमेकी भए पनि नेपालीहरु चिनियाँ भाषा बुझ्दैनन् । विकट हिमाली क्षेत्रहरुले दुई देशबीच प्राकृतिक सीमा लगाइदिएको छ । दुई देशबीच स्वतन्त्र आवत-जावत गर्न पाउने सम्झौता छैन । भिसाको कानूनी प्रावधानले आवतजावत भारततिर जस्तो सजिलो छैन । कैलाश र लुम्बिनी बाहेक अरु साझा तीर्थस्थल छैनन् । चीनले नेपालीका लागि श्रमबजार खुल्ला गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । करिब १० लाख नेपाली भारतको श्रमबजारमा अनौपचारिक तबरले जान्छन् । त्यो अवसर चीनले दिने सम्भावना छैन ।
नेपाललाई भारततिरको समुन्द्र १००० किमीभन्दा नजिक छ । चीनतिरको समुन्द्र कम्तीमा ३५०० किमी टाढा छ । भारततिरको समुन्द्रबाट मैदानी भाग धेरै छन् । तसर्थ यातायातको सञ्जाल निर्माण गर्न सजिलो छ । चीनतिरको भूगोल हिमाली र पहाडी भएको हुँदा यातायात सञ्जाल निर्माण गर्न बढी खर्चिलो र कठीन छ ।
भारतबाहेकका सार्क राष्ट्रसँगको सम्बन्धका फरक आयाम छन् । यी नजिकका व्यापारिक गन्तव्य हुन् । सबैजसो सार्क मुलुकमा नेपाली पुगेका छन् । तर सीमा नजोडिएको कारण भारत र चीनजस्तो नजिक र रणनीतिक महत्व छैन । तर व्यापार गर्नका लागि यी नजिक र सहज छन् ।
अमेरिका विश्व शक्ति हो । अमेरिकामा नेपालीको जनसंख्या निरन्तर बढ्दो छ । भारत र चीनको बीचमा हुनु नै अमेरिकाका लागि नेपालको विशिष्ट महत्व हो । समकालीन विश्व शक्ति-सन्तुलनका दृष्टिले चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी देश हो । राजनीतिक विचार र प्रणालीले पनि अमेरिका र चीन फरक छन् । व्यापारिक स्वार्थको कारणले पनि फरक छन् । विश्व वर्चश्वको प्रतिस्पर्धाका दृष्टिकोणले पनि अमेरिका र चीन फरक छन् ।
अमेरिकाले एक चीन नीति स्वीकार गरेको छैन । तिब्बत र ताइवानलाई उसले फरक ढंगले हेर्दछ । नेपालले एक चीन नीति स्वीकार गरेको छ । अमेरिका, चीन र नेपालको सम्बन्धका दृष्टिले यी आयाम महत्वपूर्ण छन् । अर्कोतिर भारत र चीनको राजनीतिक प्रणाली फरक छ । तर हिजो शीतयुद्धकालमा भारत सोभियत रुसको नजिक थियो र अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको थियो । भारत र पाकिस्तान कश्मिरको कारण शत्रु राष्ट्रजस्तो छन् ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिका र भारतको सम्बन्ध उल्लेखनीय सुधार भएको छ । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका भारतको सहयोग र साथ चाहन्छ । तर भारत खुलेर चीनको विरोधी हुन सक्दैन । व्यापारिक स्वार्थको कारण भारतले चीनसँगको सम्बन्ध कायम गर्नैपर्छ । तर भारत र चीन हिजो एकआपसमा सीमा विवादका कारण युद्ध गरेका देश हुन् । उनीहरुबीच यो तुष छ । अझै ठाउँठाउँमा सीमा विवाद छन् । दोक्लामपछि अहिले लद्दाख क्षेत्रमा भारत र चीन सीमा विवादमा फसेका छन् ।
युुरोपेली देशहरुले हिजोको तुलनामा आज नेपाललाई कम महत्व दिइरहेका छन् । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, रुस र स्केडिनेवियन देश यो समूहबाट बढी महत्वपूर्ण छन् । यही समूहमा अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र जापानलाई पनि राख्न सकिन्छ यद्यापि यी युरोपेली मुलुक हैनन् । यी देशसँग नेपालको सम्बन्ध ‘सफ्टवेयर’ सम्बन्ध हो । ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति आप्रवासनको दृष्टिकोणबाट यो सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ । खासै व्यापार छैन । तर, नेपालका चुनिदा निर्यातयोग्य बस्तुहरुको लागि यी देश अवसर हुन सक्दछन् ।
श्रमसम्बन्ध भएका देशहरुसँगको सम्बन्धमा नेपालको अरु स्वार्थ देखिन्न । थप गर्न सके व्यापारकै सम्बन्ध हो । अन्तिम समूहका देशहरु भने नेपालका लागि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा छन् ।
नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धको गाँठो मूलतः त्रिदेशीय नै हो । भारत, चीन र अमेरिका । अरु देशसँग खासै समस्या छैनन् । नेपालले ती देशसँगको सम्बन्धबाट कुनै फाइदा लिन सकेको छैन । सोभियत संघ रहुन्जेल नेपालमा उसको ठूलो रुचि र सहयोग थियो । करिब ३० बर्षयता त्यो शून्यबराबर छ । बेलायतसँगको सम्बन्ध आधुनिकीकरण र विविधीकरण भएको छैन । त्यही गोर्खा भर्तीले मात्र धानिरहेको छ । कुनै समय नेपालबारे राम्रै रुचि राख्ने फ्रान्स, जर्मनी, इटाली जस्ता देशहरु नेपालका लागि बेसरोकारका देश जस्तै बन्दै गइरहेका छन् ।
भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ भने नेपालका लागि सुर्केनी गाँठो जस्तै छ । फुकाउन जान्यो भने यो गाँठो सजिलो गरी फुक्न सक्छ तर फुकाउन जानेन भने घाँटीमै कसिन पनि सक्छ ।
चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ जस्तो महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । नेपालले यो योजनामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, यो योजना अन्तर्गत नेपाल–चीन बीचका पूर्वाधार के-के हुन् ? त्यसको लगानी कसरी जुटाइने हो ? के चीन नेपालमा केरुङको बाटो हुँदै रेल लुम्बिनी पुर्‍याउन राजी हो, जो नेपालमा आशा गरिँदैछ ? यदि छैन भने ‘बेल्ट एण्ड रोड’मा सहमत भएवापत नेपाललाई हुने फाइदा चाहिँ के हो ? कसैले प्रष्ट गरेको छैन । रेलवे निर्माणको लागतमा साझेदारी गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन ।
भारतसँगको नेपाल सम्बन्ध नयाँ चरणको गतिरोधमा पुगेको छ । पिथौरागढ–लिपुलेक बाटोको उद्घाटनपछि नेपालमा नक्सा सच्याउने कदम अघि बढ्यो । तर यसअघि पनि नेपाल-भारतबीच समस्या थिए । सुस्ता लगायतका केही सीमा विवाद बाँकी थिए । पुराना सन्धीहरुको पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थिएन । इपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको थिएन । नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुहरुको निर्यात प्रक्रियालाई सकेसम्म व्यवधान गरिरहेको थियो । महाकाली सन्धी भएको २७ वर्षपछि पनि पञ्चेश्वर कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपालका शासकवर्गले थुप्रै हचुवा काम गरेका छन् । कालापानीमा भारतीय सेना बस्यो भन्दैमा नेपालले आफ्नो नक्सा चुच्चो काटेर प्रचलनमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो । त्यो काम कस्ले गर्‍यो ? कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिइरहेको छैन । त्यो काम राजा महेन्द्रको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ । अर्कोतिर २०५४ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धी गर्दा नदीको मुहानबारे मौन बसियो । महाकाली सन्धी गर्दा को-को थिए, प्रष्टै छ । यी दुबै नेपालको शासकवर्गले गरेका राष्ट्रघाती कुकर्म थिए ।
निश्चय नै लिपुलेक–कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्या हल गर्ने एकमात्र उपाय संवाद र सहमति नै हो, अरु कुनै उपाय छैन । नेपाल–भारतबीच युद्धको कल्पना निक्कै पर पुगेको एकलकाँटे र अतिवादी सोच मात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको न्यायिक प्रक्रिया बुझ्दा त्यहाँ लगेर पनि नेपालले न्याय पाउने अवस्था देखिन्नँ । नेपाल एकमत भएर वार्ता र संवादको सार्थक प्रयास हुनु पर्दछ । त्यसका लागि सत्तामा बस्नेहरु बढी विनम्र र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । देशभित्रको विविधता र विमतिलाई जति समेट्न सकियो, बाह्य पक्षसँगको वार्ता त्यति नै बलियो हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो काम अझै हुन सकेको छैन ।
सस्तो लोकप्रियताको लागि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, देशभित्रै राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती खोज्ने, आफ्नै जनता र समुदायलाई अविश्वास गर्ने, होच्याउने, कोही ‘भारतको दलाल’ हुने, कोही ‘चीनको दलाल’ हुने, ‘नेपालको दलाल’ कोही बाँकी नरहने खालको चिन्तनबाट यो समस्या हल हुन सम्भव हुँदैन । यस्तो तरिकाले समस्या झनै गिजोलिने, जटिलता बढ्दै जाने, दुई देशबीच कुनै खास विन्दूमा पुगेर गहीरो तिक्तता आउने, कसैलाइ पनि फाइदा नहुने, सबैले दुःख पाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा जाने गृहकार्य गरिरहेको छ । एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले ५६ अर्बको सहायता अगाडि बढाउनु र अर्कोतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भ्रमणमा पनि ५६ अर्बकै सहायताको घोषणा हुनु संयोग मात्र हैन । यो काउन्टर रणनीति हो । चीनले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक योजनामा नजाओस र एमसीसीको रकम पनि नलेओस भन्ने मनसाय घुमाउरो गरी प्रष्ट गरिसकेको छ ।
यहाँनेर सोच्नुपर्ने दुई महत्वपूर्ण कुरा छन् । कोरोनाको महासंकट र यो वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? अर्को– हामी चीनसँग प्याक्ट देश हैनौं । नेपालले बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धलाई चीनको आँखाबाट हेर्न मिल्दैन । चीनका लागि अमेरिका प्रतिस्पर्धी देश हो तर हाम्रा लागि हैन ।
इन्डो–प्यासिफिक एक पूर्ण विकसित अवधारणा र सम्झौता नबनिसकेको सन्दर्भमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई केवल इन्डो–प्यासिफिक चश्माले मात्र हेर्न मिल्दैन । एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रहीत विपरीत बुँदाहरु सच्याउन आग्रह गर्ने साहस नेपालले गर्नु पर्दछ । एमसीसी सच्याएर पास हुनु राम्रो हुन्छ । अन्यथा एमसीसी फिर्ता गए जाओस्, त्यही एउटा मुद्दामा देशलाई वर्षौं विभाजित गरेर राख्न हुँदैन । त्यही एउटा एमसीसी गिजोली बसेर कसैलाई फाइदा छैन । यसले अमेरिका र पश्चिमा देशहरुसँगको सम्बन्धमा भबिष्यमा समस्या थप्छ ।
गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति भारत हुँदै नेपाल आउनुको गम्भीर रणनीतिक अर्थ थियो । नेपाल भ्रमणमा आउने राष्ट्रपति सीले तमिलनाडुमा नरेन्द्र मोदीसँग भेटेर आउन जरुरी थिएन । उनी सिधै नेपाल आउन सक्थे । अरु कुनै बेला भारत जान सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन् । यो प्रवृत्तिको कडी लिपुलेकमा देखियो । भारत–चीनबीच लिपुलेक नाकालाई लिएर दुईपटक सम्झौता भइसकेको छ । नेपालको भूमिबारे चीनले भारतसँग सम्झौता गर्ने कुनै कानुनी वा नैतिक अधिकार राख्दैन । यसले के देखाउँछ भने अन्ततः यो मुद्दा त्रिदेशीय नै बन्छ । तसर्थ नेपालले त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणालाई बलियो गरी पक्रन जरुरी छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिशाली हुँदै गएपछि र कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट सम्बन्धको अध्याय अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने पीर भारतलाई छ । तर चीन नेपालको मूल्यमा भारतसँगको सम्बन्धलाई हानी गर्ने मनस्थितिमा छैन । कम्तीमा भारतलाई यो थाहा छ कि नेपालले चिनियाँ समुन्द्र भारतीय समुन्द्रको प्रतिस्थापनमा प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै महंगो बनाउँछ । नेपाली अर्थतन्त्र झन् क्रक्रिने सम्भावना हुन्छ ।
तर नेपाल–चीन थप नाका खोल्न भने ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपाल लेन्डलकबाट लेण्डलिङ्क्ड हुने अरु कुनै तरिका छैन । तातोपानी र केरुङ दुई नाकाले नेपालमा चीनको व्यापार हिस्सा निक्कै बढेको छ । यसले नेपालको भारतसँगको निर्भरता त घटाउँछ तर यो नेपालका लागि तात्विक भिन्नताको कुरा हैन । भारतको साटो चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्ने हो ।
नेपालले भारत–चीन दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने गतिशील पुलको अवधारणा चीनतिर नाका नबढाइकन लागू हुँदैन । नाथुला पास, लिपुलेक र सिप्की नाका पूर्ण सुचारु भएपछि नेपालको भूराजनीतिक महत्व स्वतः घट्दछ । भारत–चीन सिधै जोडिन्छन्, नेपाल पुल बनिरहनु नै पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाललाई महत्व दिन छोड्नेछ । किनकी भारतको विशाल जनसंख्या र बजार सम्भावनाका अगाडि चीनका लागि नेपाल सानो र थोरै क्रय क्षमता भएको ग्राहकजस्तो हुनेछ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलको प्रश्न पनि यहीँनेर जोडिन्छ । चीनले काठमाडौंसम्म ल्याउनका लागि एकल लगानीमा रेलमार्ग बनाउला भनेर आशा गर्न त पाइन्छ तर त्यो सम्भावना ज्यादै न्युन हुन्छ । भारतले चिनियाँ रेललाई विहार वा उत्तर प्रदेशको भारी जनसंख्यासम्म पहुँच नदिउञ्जेल काठमाडौंको बजारका लागि मात्र चीनले रेलवेमा ठूलो लगानी गर्दैन । यो सोच सफल बनाउने हो भने यहाँनेर पनि त्रिदेशीय सम्झौता र साझेदारी चाहिन्छ । भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको पछिल्लो स्थितिमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल मार्ग गफै मात्र हो ।
अहिले हामी भूराजनीतिक दुश्चक्रको नयाँ फन्कोमा छौं । नयाँ फन्कोका जटिलता नेपालले राम्रोसँग पर्गेल्न जरुरी छ । कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सके नेपालले भारत, चीन र अमेरिका – ३ वटै देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखी लाभ लिन सक्दछ । यी ३ देशसँगको सन्तुलित सम्बन्धले सम्पूर्ण बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धमा अनुकूलता थप्दछ । यिनीहरुसँगकै सम्बन्ध बिग्रिएमा अरु देशले नेपाललाई विश्वास र सहयोग गर्ने आधार बाँकी रहँदैन । हामीले कुनै आवेश, उत्तेजना वा क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सन्तुलन गुमायौं भने त्यसको महंगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।
सामन्तसँग ओलीको राष्ट्रवादी साईनो !
इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिप्रति अमेरिका इमान्दार भए दक्षिण एशियाली देशहरु केन्द्रभागमा हुन्छन्
कमिसन कसैले तमसुक गरेर ‘बुझी लियाँ’ भन्छ र नेताज्युहरू !
बाबुरामलाई सुलीमा चढाउने मौका यही हो !
कमरेडहरु ! यस्तै दुर्दशाका लागि थियो कम्युनिष्ट आन्दोलन ?
वर्चश्‍ववाद, द्विदलीयता र विकल्पको प्रश्‍न
अमेरिकी लोकतन्त्रको शल्यक्रिया
प्रदेश नामाकरणः किन यतिधेरै कमजोर भयो ‘पहिचानको राजनीति’ ?
कृपया प्रधानमन्त्रीलाई अरु कुनै प्रश्न नगर्नु होला
‘ट्रम्पलाई पुनः राष्ट्रपति चुन्नु सामूहिक पागलपन हुनेछ’
कोरोना महाव्याधीले पश्चिमा लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्ष उजागर गरिरहेछ
जीवन शैली, विचार
तनाव व्यवस्थापनका उपायहरु
किन उपयुक्त छैन अहिलेको अख्तियार ? कस्तो बनाउने जनलोकपाल ?
अमेरिकामा ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’का लागि ‘द्वी-दलीय प्रणाली’को अन्त्य अत्यावश्यक
दलतन्त्रको बीचमा उन्नत राजनीतिको बहस
कमरेड प्रचण्डलाई प्रश्‍न: तपाईं मुलधारमा कि दोधारमा ?